Karatra krismasy natokana ho azy: hevitra sy fomba fanaovana azy | Famoronana an-tserasera
Ny vanim-potoanan'ny Noely dia iray amin'ireo mampiavaka indrindra ny olona maro manerantany. Ary ny iray amin'ireo pitsopitsony ananany ho an'ny fianakaviany, ny namany na ny havany dia ny fandefasana karatra krismasy. Na izany aza, raha tianao ho lasa manokana kokoa io dia tokony handeha haka karatra krismasy natokana ho anao ianao.
Na dia heverinao ho hadalana aza izany, na efa tsy tonta intsony, ny marina dia mendrika izany ny famerenana an'io illusion io amin'ny fandraisana azy ireo. Fa raha tsy mahay ianao mamorona karatra krismasy natokana ho azy, na mieritreritra ianao fa tsy manana hevitra hananganana azy ireo, tonga amin'ny toerana mety. Satria eto ambany dia ho afaka mankafy hevitra vitsivitsy ianao izay hanampy anao hanaitra ilay olona amin'ny fomba tena miavaka.
1 Karatra Krismasy natokana ho azy: hevitra izay hahatonga azy ireo tsy ho hadino
1.1 Karatra Krismasy natokana ho an'ny tenany: snowman tena "cottony" vitsivitsy
1.2 Karatra krismasy vita amin'ny bokotra
1.3 Karatra Krismasy anao manokana miaraka amin'ny sarinao
1.3.1 Karatra Krismasy natokana ho an'ny Pixiz
1.3.3 Karatra Krismasy natokana ho an'ny Pixum
1.3.4 Karatra Krismasy natokana ho an'i Crello
2 Ahoana no fomba hamoronana ny karatra krismasy anao manokana
Karatra Krismasy natokana ho azy: hevitra izay hahatonga azy ireo tsy ho hadino
Azonao atao ny mividy karatra krismasy amin'ny toerana maro, manomboka amin'ny toerana ara-batana ka hatramin'ny fivarotana an-tserasera. Fa raha mandany fotoana kely any an-trano ianao, ireo dia ho tonga lafatra koa, ary tsara kokoa noho ireo novidina aza satria tsy vitan'ny hoe maneho antsipirihany hahatsiarovana an'io olona manokana io; Fa nandany fotoana ihany koa ianao namoronana zavatra iray avy tamin'ny fieritreretana hoe iza no handray azy.
Noho izany, androany dia nanolotra sosokevitra izahay omeo hevitra vitsivitsy ianao mba hahafahanao mandefa ny firariana tsara indrindra ho anao ary, iza no mahalala, koa angovo tsara ho an'ireo olona mila fanerena kely hahita ny zavatra amin'ny fomba tsara. Te hahafantatra izay azonao atao ve ianao? Diniho tsara ireo hevitra ireo.
Karatra Krismasy natokana ho an'ny tenany: snowman tena "cottony" vitsivitsy
Mba hanaovana an'ity karatra ity dia mila penina na marika maharitra, baoritra kely sy landihazo, singa kintana ianao. Tokony hanomboka amin'ny fanapahana ny karatra amin'ny baoritra ianao. Manoro hevitra izahay fa tokony hanana loko matanjaka izy mba hisongadinan'ny landihazo. Ohatra, mena, maintso, mainty, volamena ... Fa maninona? Eny, satria raha apetrakao amin'ny baoritra fotsy ianao dia nofoanana ny fotsy fotsy ary avy eo tsy hanana ny fiatraikany 3D izay tianay omena azy ianao.
Avy eo dia mila ianao maka landihazo ary manaova baolina telo samy hafa habe: iray lehibe, iray antonony ary iray kely. Araka ny fantatrao, snowman dia misy an'ireny baolina ireny. Ary io no haverinao averina.
Ankehitriny, amin'ny baoritra dia tsy maintsy manapaka orona miendrika karaoty (volomboasary) ianao, scarf (izay mety ho mena, mainty ...) ary satroka ambony. Anananao daholo izany? Fotoana izao haka ny lakaoly sy hametahana ireo baolina, ny iray eo ambonin'ilay iray hafa.
Ampio ny orona, ny satroka ary ny sara ary fenoy ny antsipiriany (ohatra ny sandry, ny maso, ny bokotra ...) miaraka amin'ny marika mainty izay efa noresahintsika teo aloha. Ary hanana ny karatra krismasy tonga lafatra ianao.
Karatra krismasy vita amin'ny bokotra
Ny bokotra dia zavatra hita foana ao an-trano. Ary mazava ho azy, imbetsaka ianao tsy mahalala akory izay niavian'izy ireo. Ka miaraka amin'ny karazany maro be ianao. Raha te hampiasa azy ireo indray dia azonao atao ny mametraka azy ireo hanao karatra krismasy natokana ho azy. Ahoana no anaovana azy? Eny, mora be.
Hanombohana, manomboka amin'ny fisafidianana ireo bokotra tianao hampiasaina. Rehefa azonao izany dia eritrereto izao manaraka izao: Ahoana no hahamendrika azy ireo kokoa: toy ny "baolina Krismasy", toy ny hazo krismasy, toy ny snowman ...? Eny eny, izany rehetra izany sy ny maro hafa dia izay azonao atao amin'ny bokotra.
Raha ny marina dia mamela anao sary vitsivitsy izahay izay hanampy anao hahita izay azon'ny bokotra atao aminao. Ny marina dia misy zavatra ho an'ny tsirony rehetra, satria azonao atao koa ny manamboatra hazo krismasy, vatomamy, fehiloha misy bokotra, serfa (Rudolph) ...
Karatra Krismasy anao manokana miaraka amin'ny sarinao
Tsy misy zavatra manokana manokana noho ny sarinao, na ny fianakavianao, hiarahabana ireo fety. Ary ny marina dia zatra mampiasa azy ireo izy ireo. Eny, na ny Royal House aza! Ka safidy hafa anananao io.
Ok izao Tsy ny rehetra no mahay mamory sary hamoronana ny karatra farany, ary mila mampiasa ireo pejy an-tserasera na programa ianao. manao azy. Raha tsy dia mahay loatra ianao dia amporisihinay ny pejy Internet voalohany, izany hoe ny Internet. Fa raha tsy ratsy amin'ny famolavolana ianao dia miasà amin'ny programa mba hamoronana zavatra tena izy ary avy hatrany am-boalohany. Amin'ny ankapobeny, azonay atao ny manome soso-kevitra ireto pejy manaraka ireto hamoronana karatra Krismasy natokana ho anao:
Karatra Krismasy natokana ho an'ny Pixiz
Izy io dia iray amin'ireo pejy malaza sy be mpampiasa indrindra amin'ny fanaovana collage sary. Ao no ahitanao modely Krismasy samihafa izay hanampy anao hanome anao hevitra hamoronana karatra krismasy tsara indrindra. Ankoatr'izay, manana tombony izy fa tsy voafetra amin'ny sary iray fotsiny fa afaka mahita sary maromaro ianao, izay mety ho tsara ho an'ny fianakaviana iray (azonao atao ny mamorona fiarahabana miaraka amin'ny sarin'ny fianakaviana na ny tenanao amin'ny toerana samihafa. ataovy izany, ahafahanao misintona azy maimaim-poana ary tsy misy karazana logo, ka afaka manonta azy ianao any aoriana ary mandefa na manome an'izay tianao.
Safidy iray hafa azonao atao dia ny Canva. Raha ny marina dia iray amin'ireo ampiasaina indrindra izy io satria afaka mamorona ny endrika tadiavinao ianao ary avy eo mitahiry azy amin'ny solosainao hanontana azy. Ny zavatra tsara momba an'io dia izany Tsy mamela anao hampiditra sary amin'ny modely fotsiny izy io, fa azonao atao koa ny manohina azy ireo ary manampy lahatsoratra, emoji na karazana haingon-trano hafa mamorona zava-baovao tanteraka.
Karatra Krismasy natokana ho an'ny Pixum
Tena mitovy amin'ny Pixiz izy io, satria azonao atao manaova karatra karatra Krismasy natokana ho an'ny sarinao. Mazava ho azy, amin'ity tranga ity, ary tsy toy ny hafa, miresaka momba ny pejy iray izay mampiakatra ny sarany amin'ireo karatra ireo izahay.
Karatra Krismasy natokana ho an'i Crello
Mitovy amin'i Canva, manana fomba hafa ianao hamoronana karatra fialantsasatra ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ho fanampin'izany, maimaim-poana izy io ary vita indray mandeha dia azonao atao ny misintona sy mizara azy. Ka mety hahaliana ny manao ny volanao manokana.
Ahoana no fomba hamoronana ny karatra krismasy anao manokana
Ankehitriny rehefa manana hevitra vitsivitsy ianao dia izao ny fotoana hanombohana, tsikelikely, hamoronana karatra paositry ny Noely. Ary noho izany dia anoloranay ireto manaraka ireto:
Eritrereto ny famolavolana tianao hatao. Misy zavatra ao an-tsainao foana. Avy eo ianao dia tsy maintsy mikaroka ireo pejy hanatanterahana azy, raha tsy hoe mahay ny tenanao ianao.
Manana izay ilainao. Andian-teny iray, ireo sary tianao hampidirina, ireo emojis na sary masina ampidirinao, na ireo fitaovana raha te hanao karatra manokana sy vita tanana ianao.
Mandehana miasa ary aza miala mandra-pahavitany. Ny iray amin'ireo lesoka lehibe indrindra azonao atao dia ny manomboka fa tsy vita, satria amin'ny farany dia indroa na intelo no hanaovana azy. Ka andramo ny mamorona azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy ho ela dia ho tsapanao fa mahomby kokoa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Karatra krismasy natokana ho azy